ဂမျဘီယာအမှု မှတျစု / ပထမနေ့ (၁၀-၁၂-၂၀၁၉) / provisional measures – Kyaw Zaw Oo's Blog
December 10, 2019 January 14, 2020 web_master
ဂမျဘီယာအမှု မှတျစု / ပထမနေ့ (၁၀-၁၂-၂၀၁၉) / provisional measures
ဂမ်ဘီယာအမှု မှတ်စု / ပထမနေ့ (၁၀-၁၂-၂၀၁၉) / provisional measures
[ – safe zone ၊ ၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ၊ ကျူငုတ်မကျန် ဖြတ်လေးဖြတ်မှ သက်သာခွင့်ကိစ္စများ – ]
ဂမ်ဘီယာ ဥပဒေအဖွဲ့က တင်ပြရာမှာ နောက်ဆုံးရှေ့နေကြီးနှစ်ယောက်ဟာ Provisional Measure ဆိုတဲ့ ကြားဖြတ်အရေးယူမှု အမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့အကြောင်းကို ဒီကနေ့ သည်ဟိတ် ICJ တရားရုံး ကြားနာမှုမှာ ဖိဖိစီးစီး လေးလေးနက်နက်ပြောသွားတာကို တွေ့ရတယ်။ အခုနက ဒီကစံတော်ချိန် ခြောက်နာရီ လေးဆယ့်ငါးမှာပြီးတယ်။ သူတို့လျှောက်လဲသွားတာတွေရဲ့ ကျနသေသပ်မှု ပညာရှင်ပီသမှုတွေကို နားထောင်ပြီးတော့ ဒီလိုတရားရုံးတွေဟာ ဥပဒေသမားတွေက ဦးဆောင်မယ့်နေရာဖြစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ အရေးအရာ မဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်ချက်ပြုမိတယ်။
မလိမ်မာတဲ့တပည့်တွေထောင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသုံးယောက်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြုံးရယ်နေကြတဲ့ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဓါတ်ပုံကြီးကို ဂမ်ဘီယာ ရှေ့နေကြီး (second last one) က ဆလိုက်ထိုးပြပြီး ဒေါ်စုဟာ ဒီလူတွေဟာအားလုံးနဲ့တစ်ကြိတ်တည်းတစ်ဥာဏ်တည်းသာလျှင် ဖြစ်တယ် လို့ပြောသွားတယ်။ အစိုးဟာ တာဝန်ခံမှု ဖြစ်မြောက်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး incapable of delivering accountability လို့လည်း ကြားလိုက်တယ်။ အပြစ်ရှိတဲ့သူကို ဖမ်းလို့ ထောင်ချနိုင်စွမ်းမရှိဘူး လို့ ပြောချင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲသည် ရှေ့နေကြီးဟာ provisional measures ဆိုတဲ့စကားလုံးကို နိုင်းချင်းဖိသုံးပြီး တောင်းဆို တင်ပြသွားခဲ့တယ်။ provisional measures are urgently needed ဒါမှမဟုတ် provisional measures are justified စသည်ဖြင့် ထပ်ကာတလဲလဲ ပြောသွားတယ်။ မြင်မိကြားမိလို့ အခြား ထောက်ပြချင်တာတွေ ရှိပေမယ့် ရခိုင်တွေအတွက်ရော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်ပါ သက်ရောက်မှု ရှိလာနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပဲ ဒီကနေ့ ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာဟာ ဒီအမှုမှာ ရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလားအလာကို မြင်နေလို့ပါပဲ။
ဒီအမှုရှုံးသွားရင် ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ အခုနက provisional measures (ကြားဖြတ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု) တွေ လုပ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကနောက်က လိုက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကအားရှိရင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မလိုက်နာဘဲနေလို့ အဆင်ပြေကောင်း ပြေနိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံက အားမရှိရင် မလုပ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ အနေအထားတွေ ရောက်လာနိုင်လို့ပါပဲ။
ဂမ်ဘီယာက တောင်းဆိုတဲ့ သက်သာခွင့် (The relief sought) တွေအနေနဲ့ ငါးရပ်တင်ပြထားတယ်။ အောက်ပါအချက်ငါးရပ်ကို ICJ က ဆုံးဖြတ်ကြေငြာပေးဖို့ တောင်းဆိုတင်ပြတယ်။
တစ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ Genocide Convention ကို ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်၊ ဆက်လက် ချိုးဖောက်နေတယ်၊ နှစ်။ ဒီလို မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ချက်ချင်းရပ်စဲပြီး Genocide Convention ပါတာဝန်တွေကို လေးစားလိုက်နာရမယ်၊
သုံး။ ဂျန်နိုဆိုက် ကျူးလွန်သူတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံရုံးကပဲဖြစ်ဖြစ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ပေးရေးကို သေချာပေါက်ဆောင်ရွက်ရန်၊
လေး။ ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်တွေ အပြည့်အ၀နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တွေနဲ့တကွ လုံခြုံ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နေရပ်သုိ့ ပြန်နိုင်ရေး ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရန်။
ငါး။ Genocide Convention ကိုထပ်ပြီး မချိုးဖောက်ပါဘူးလို့ အာမခံချက်တွေပေးရမယ်။
ဒီသက်သာခွင့်ငါးရပ်ကို provisional measures (ကြားဖြတ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု) တွေအဖြစ် တရားရုံးက ညွှန်ပြ (indicate) လုပ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာ ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမား လုပ်ရမှာတွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘင်္ဂါလီတွေနိုင်ငံသားဖြစ်လာနိုင်အောင် ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရတာမျိုးကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့လျှောက်ထားလွှာက တောင်းဆိုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ၀က်အူတွေ တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် ကျပ်လာတဲ့အခါ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော သို့မဟုတ် မောင်တောတစ်ခုတည်းကို ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် safe zone အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရာမှာ ဒီတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အရေးပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်။
တောင်းဆိုတဲ့ သက်သာခွင့် အချက်နံပါတ် (လေး) မှာ လုံခြုံ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နေရပ်သုိ့ ပြန်နိုင်ရေး လို့ ဆိုထားတာကိုး . . . ။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ICJ ၊ ICC နဲ့ အာဂျင်တီးနားစွဲဆိုကြိုးပမ်းမှုတွေလုပ်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ကြိုဆိုမှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ လက်ကြီးကြီးနဲ့ heavy-handedly ကိုင်ခဲ့တာတွေကို ခံစားခဲ့သူတွေ ဆီက လာတာဖြစ်ပါတယ်။
သောင်းကျန်းသူနှိမ်နင်းရေးကို လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ပုန်ကန်သူတွေနဲ့ ဆက်စပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို အရပ်သား၊ ကလေး၊ မိန်းမ မချန် စိစိညက်ညက်ကြေအောင် ချေမှုန်းတတ်တယ်လို့ ပြောရင် မြန်မာ့တပ်မတော်ကတော့ မဟုတ်ဘူး လို့ငြင်းမှာပါဘဲ။ သုံးစွဲရိုး ဗမာစကားတောင် ရှိပါတယ်။ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်စေရ ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။
ICJ မှာ ဂမ်ဘီယာက မြန်မာနိုင်ငံကို တရားစွဲတဲ့ ကိစ္စမှာ ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လို ရပ်တည်ပါတယ် ဆိုပြီး အသီးသီး အသကအသက ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ ကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ရှမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကချင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆီက ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ဖတ်ရင်း အဲဒီဒေသတွေမှာ ခံစားခဲ့ကြတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကျွန်တော် မဆိုင်းမတွ တွေးမိပါတယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးဒေသမှာ ကရင်လူမျိုးတွေ ခံစားခဲ့ရတာ အခုဘင်္ဂါလီတွေခံစားခဲ့ရတာထက် မလျော့လောက်ပါဘူး။
အခုလည်း ၂၀၁၉ ရခိုင်မှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်နေပေမယ့် လက်တုံ့နေတာဟာ အချက်နှစ်ချက် ရှိပါတယ်။ (တစ်) သတင်းဆက်သွယ်မှုကောင်းတဲ့ခေတ်ကို ရောက်သွားလို့ (နှစ်) ရခိုင်တွေကို လက်ကြီးကြီးနဲ့ မကိုင်တွယ်ခင်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေကို လက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုင်ထားတဲ့ကိစ္စရှိနေကြောင်းကို ရပ်ကွက်ကသိနေလို့ ရခိုင်တွေ သက်သာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်အဟောင်းနဲ့မှ ပုန်ကန်မှုကို ချေမှုန်းတတ်သူတွေဟာ အခင်းအကျင်းအသစ်မှာ အခက်ကြုံနေရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှတ်စုကို ဒီနေရာမှာ အချုပ်စကားဆိုရင် – အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကို အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ရာ၊ နောက်နောင် ဒီလိုပြစ်မှုမျိုးတွေ မကျူးလွန်နိုင်အောင် နိုင်ငံတကာယန္တရားတွေကလုပ်ဆောင်တာကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ အကောင်းဘက်ကရှုမြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘူးသီတောင် မောင်တောကို safe zone လုပ်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ကိစ္စ နဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ရာတွေဟာ အချုပ်အချာအာဏာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှာကြံကြရင် တွေ့နိုင်ကြမှာပါ။
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်
ညနေ ရှစ်နာရီ သုံးဆယ်မိနစ်
[ – safe zone ၊ ၈၂ နိုငျငံသားဥပဒေ၊ ကြူငုတျမကနျြ ဖွတျလေးဖွတျမှ သကျသာခှငျ့ကိစ်စမြား – ]
ဂမျဘီယာ ဥပဒအေဖှဲ့က တငျပွရာမှာ နောကျဆုံးရှနေ့ကွေီးနှဈယောကျဟာ Provisional Measure ဆိုတဲ့ ကွားဖွတျအရေးယူမှု အမိနျ့ခမြှတျပေးဖို့အကွောငျးကို ဒီကနေ့ သညျဟိတျ ICJ တရားရုံး ကွားနာမှုမှာ ဖိဖိစီးစီး လေးလေးနကျနကျပွောသှားတာကို တှရေ့တယျ။ အခုနက ဒီကစံတျောခြိနျ ခွောကျနာရီ လေးဆယျ့ငါးမှာပွီးတယျ။ သူတို့လြှောကျလဲသှားတာတှရေဲ့ ကနြသသေပျမှု ပညာရှငျပီသမှုတှကေို နားထောငျပွီးတော့ ဒီလိုတရားရုံးတှဟော ဥပဒသေမားတှကေ ဦးဆောငျမယျ့နရောဖွဈပွီးတော့ နိုငျငံရေးသမားတှရေဲ အရေးအရာ မဟုတျဘူးလို့ မှတျခကျြပွုမိတယျ။
မလိမျမာတဲ့တပညျ့တှထေောငျခဲ့တဲ့ ဗိုလျခြုပျကွီးသုံးယောကျနဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ပွုံးရယျနကွေတဲ့ ကွျောငွာဆိုငျးဘုတျဓါတျပုံကွီးကို ဂမျဘီယာ ရှနေ့ကွေီး (second last one) က ဆလိုကျထိုးပွပွီး ဒျေါစုဟာ ဒီလူတှဟောအားလုံးနဲ့တဈကွိတျတညျးတဈဉာဏျတညျးသာလြှငျ ဖွဈတယျ လို့ပွောသှားတယျ။ အစိုးဟာ တာဝနျခံမှု ဖွဈမွောကျလာအောငျ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးမရှိဘူး incapable of delivering accountability လို့လညျး ကွားလိုကျတယျ။ အပွဈရှိတဲ့သူကို ဖမျးလို့ ထောငျခနြိုငျစှမျးမရှိဘူး လို့ ပွောခငျြတာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
အဲသညျ ရှနေ့ကွေီးဟာ provisional measures ဆိုတဲ့စကားလုံးကို နိုငျးခငျြးဖိသုံးပွီး တောငျးဆို တငျပွသှားခဲ့တယျ။ provisional measures are urgently needed ဒါမှမဟုတျ provisional measures are justified စသညျဖွငျ့ ထပျကာတလဲလဲ ပွောသှားတယျ။ မွငျမိကွားမိလို့ အခွား ထောကျပွခငျြတာတှေ ရှိပမေယျ့ ရခိုငျတှအေတှကျရော မွနျမာနိုငျငံသားတှအေားလုံးအတှကျပါ သကျရောကျမှု ရှိလာနိုငျတဲ့ကိစ်စတဈခုကိုပဲ ဒီကနေ့ ထောကျပွခငျြပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မွနျမာဟာ ဒီအမှုမှာ ရှုံးသှားနိုငျတဲ့အလားအလာကို မွငျနလေို့ပါပဲ။
ဒီအမှုရှုံးသှားရငျ ဘာဖွဈလာမလဲဆိုတော့ အခုနက provisional measures (ကွားဖွတျအရေးယူဆောငျရှကျမှု) တှေ လုပျပေးရမယျ ဆိုတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကနောကျက လိုကျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံကအားရှိရငျ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို မလိုကျနာဘဲနလေို့ အဆငျပွကေောငျး ပွနေိုငျပမေယျ့ နိုငျငံက အားမရှိရငျ မလုပျမဖွဈဆိုတဲ့ အနအေထားတှေ ရောကျလာနိုငျလို့ပါပဲ။
ဂမျဘီယာက တောငျးဆိုတဲ့ သကျသာခှငျ့ (The relief sought) တှအေနနေဲ့ ငါးရပျတငျပွထားတယျ။ အောကျပါအခကျြငါးရပျကို ICJ က ဆုံးဖွတျကွငွောပေးဖို့ တောငျးဆိုတငျပွတယျ။
တဈ။ မွနျမာနိုငျငံဟာ Genocide Convention ကို ခြိုးဖောကျခဲ့တယျ၊ ဆကျလကျ ခြိုးဖောကျနတေယျ၊ နှဈ။ ဒီလို မှားယှငျးတဲ့လုပျရပျတှကေို ခကျြခငျြးရပျစဲပွီး Genocide Convention ပါတာဝနျတှကေို လေးစားလိုကျနာရမယျ၊
သုံး။ ဂနျြနိုဆိုကျ ကြူးလှနျသူတှကေို အပွညျပွညျဆိုငျရာခုံရုံးကပဲဖွဈဖွဈ စီရငျပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ တရားရုံးက ပွဈဒဏျပေးရေးကို သခြောပေါကျဆောငျရှကျရနျ၊
လေး။ ဘင်ျဂါလီဒုက်ခသညျတှေ အပွညျ့အဝနိုငျငံသားဖွဈခှငျ့တှနေဲ့တကှ လုံခွုံ ဂုဏျသိက်ခာရှိစှာ နရေပျသို့ ပွနျနိုငျရေး ကိစ်စကို ဆောငျရှကျရနျ။
ငါး။ Genocide Convention ကိုထပျပွီး မခြိုးဖောကျပါဘူးလို့ အာမခံခကျြတှပေေးရမယျ။
ဒီသကျသာခှငျ့ငါးရပျကို provisional measures (ကွားဖွတျအရေးယူဆောငျရှကျမှု) တှအေဖွဈ တရားရုံးက ညှနျပွ (indicate) လုပျမယျဆိုရငျ မွနျမာ့လူအဖှဲ့အစညျးမှာ ပွောငျးလဲမှုကွီးကွီးမားမား လုပျရမှာတှေ ရှိလာမှာ ဖွဈတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ဘင်ျဂါလီတှနေိုငျငံသားဖွဈလာနိုငျအောငျ ၁၉၈၂ မွနျမာနိုငျငံသား ဥပဒကေို ပွငျဆငျပေးရတာမြိုးကို ဂမျဘီယာနိုငျငံရဲ့လြှောကျထားလှာက တောငျးဆိုနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ဝကျအူတှေ တဈရဈပွီးတဈရဈ ကပျြလာတဲ့အခါ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော သို့မဟုတျ မောငျတောတဈခုတညျးကို ဘင်ျဂါလီတှအေတှကျ safe zone အဖွဈသတျမှတျနိုငျဖို့ရာမှာ ဒီတရားရုံးဆုံးဖွတျခကျြဟာ အရေးပါကောငျးပါလာနိုငျတယျ။
တောငျးဆိုတဲ့ သကျသာခှငျ့ အခကျြနံပါတျ (လေး) မှာ လုံခွုံ ဂုဏျသိက်ခာရှိစှာ နရေပျသို့ ပွနျနိုငျရေး လို့ ဆိုထားတာကိုး . . . ။
မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ICJ ၊ ICC နဲ့ အာဂငျြတီးနားစှဲဆိုကွိုးပမျးမှုတှလေုပျတာနဲ့ တဈပွိုငျနကျ ကွိုဆိုမှုတှအေမြားကွီးတှရေ့တယျ။ လကျကွီးကွီးနဲ့ heavy-handedly ကိုငျခဲ့တာတှကေို ခံစားခဲ့သူတှေ ဆီက လာတာဖွဈပါတယျ။
သောငျးကနျြးသူနှိမျနငျးရေးကို လုပျဆောငျတဲ့အခါ မွနျမာ့တပျမတျောဟာ ပုနျကနျသူတှနေဲ့ ဆကျစပျလူ့အဖှဲ့အစညျးတှကေို အရပျသား၊ ကလေး၊ မိနျးမ မခနျြ စိစိညကျညကျကွအေောငျ ခမြှေုနျးတတျတယျလို့ ပွောရငျ မွနျမာ့တပျမတျောကတော့ မဟုတျဘူး လို့ငွငျးမှာပါဘဲ။ သုံးစှဲရိုး ဗမာစကားတောငျ ရှိပါတယျ။ ကြူပငျခုတျ ကြူငုတျမကနျြစရေ ဆိုတဲ့စကားဖွဈပါတယျ။
ICJ မှာ ဂမျဘီယာက မွနျမာနိုငျငံကို တရားစှဲတဲ့ ကိစ်စမှာ ဘယျနရောကနေ ဘယျလို ရပျတညျပါတယျ ဆိုပွီး အသီးသီး အသကအသက ထုတျပွနျကွတဲ့ ကရငျအဖှဲ့အစညျးတှေ၊ ရှမျးအဖှဲ့အစညျးတှေ၊ ကခငျြအဖှဲ့အစညျးတှဆေီက ထုတျပွနျခကျြတှကေို ဖတျရငျး အဲဒီဒသေတှမှော ခံစားခဲ့ကွတဲ့ ဒုက်ခတှကေို ကြှနျတျော မဆိုငျးမတှ တှေးမိပါတယျ။ ၁၉၉၀ ပွညျ့လှနျနှဈတှကေ ဧရာဝတီတိုငျး ဘိုကလေးဒသေမှာ ကရငျလူမြိုးတှေ ခံစားခဲ့ရတာ အခုဘင်ျဂါလီတှခေံစားခဲ့ရတာထကျ မလြော့လောကျပါဘူး။
အခုလညျး ၂၀၁၉ ရခိုငျမှာ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈနပေမေယျ့ လကျတုံ့နတောဟာ အခကျြနှဈခကျြ ရှိပါတယျ။ (တဈ) သတငျးဆကျသှယျမှုကောငျးတဲ့ခတျေကို ရောကျသှားလို့ (နှဈ) ရခိုငျတှကေို လကျကွီးကွီးနဲ့ မကိုငျတှယျခငျမှာ ဘင်ျဂါလီတှကေို လကျကွီးကွီးနဲ့ကိုငျထားတဲ့ကိစ်စရှိနကွေောငျးကို ရပျကှကျကသိနလေို့ ရခိုငျတှေ သကျသာနတော ဖွဈပါတယျ။ စာအုပျအဟောငျးနဲ့မှ ပုနျကနျမှုကို ခမြှေုနျးတတျသူတှဟော အခငျးအကငျြးအသဈမှာ အခကျကွုံနရေတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒီနမှေ့တျစုကို ဒီနရောမှာ အခြုပျစကားဆိုရငျ – အပွဈကြူးလှနျသူတှကေို အပွဈပေးနိုငျဖို့ရာ၊ နောကျနောငျ ဒီလိုပွဈမှုမြိုးတှေ မကြူးလှနျနိုငျအောငျ နိုငျငံတကာယန်တရားတှကေလုပျဆောငျတာကို ကြှနျတျောအနနေဲ့ အကောငျးဘကျကရှုမွငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘူးသီတောငျ မောငျတောကို safe zone လုပျပေးဖို့ ဆိုတဲ့ကိစ်စ နဲ့ ၁၉၈၂ နိုငျငံသားဥပဒကေို ပွငျဆငျဖို့ရာတှဟော အခြုပျအခြာအာဏာနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ကိစ်စတှေ ဖွဈပါတယျ။
အလုပျဖွဈနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှေ ရှာကွံကွရငျ တှနေို့ငျကွမှာပါ။
၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာလ (၁၀) ရကျ
ညနေ ရှဈနာရီ သုံးဆယျမိနဈ
Previous ဟာဂြီ ဦးအေးလှငျကို ယုံထိုကျ မယုံထိုကျ
Next ICJ ကို တကျ​ရှငျး​နရေတဲ့ ​နေ့​တှမှော​တောငျ​ အရပျ​သား​တှကေို ရညျ​ရှယျ​ ပဈ​ခတျ​မှု​တှေ ရှိ​နတေယျ